Hisy fanavaozana hivoahana hanamboarana ny efijery manelatselatra ny OnePlus 6 | Androidsis
Ny OnePlus 6 dia hanamboatra ny olan'ny efijery amin'ny fanavaozana manaraka
Vao tsy ela akory izay no nilaza taminay momba ny olana sedrain'ireo mpampiasa sasany amin'ny OnePlus 6. Taorian'ny fanavaozana ny OxygenOS, misy ny mpampiasa manana olana amin'ny famirapiratany mandeha ho azy. Zavatra miafara miteraka flicker eo amin'ny efijery. Tsy olana lehibe io, fa manelingelina be an'ireo mpampiasa azy io.
anefa Tsy mila miandry ela loatra ianao mandra-pahatongan'ny vahaolana ho an'ny OnePlus 6 anao. Satria ny mpanamboatra azy mihitsy dia te hampita fa miasa amin'ny fanavaozana vaovao izy ireo izay hamarana ireo olana ireo ao amin'ilay fitaovana, ary tsy ho ela dia ho tonga izy io.
OnePlus dia namoaka fanambarana tao amin'ny tranonkalany, izay niresahan'izy ireo momba ity olana ity amin'ny efijery avo lenta. Nilaza izy ireo fa ho avy tsy ho ela ny fanavaozana amin'ny alàlan'ny OTA mankany amin'ny OnePlus 6 rehetra. Misaotra an'io fa tokony ho voavaha tanteraka ity olana ity ary mandeha ara-dalàna indray ny telefaona.
fa Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy nomena daty hanombohana ity fanavaozana ity. Ny orinasa dia efa mamarana ny antsipirian'ny fandefasana azy, ary ny zava-drehetra dia milaza fa ho avy izy io miaraka amin'ny patch fiarovana Android amin'ny volana Aogositra. Ka toa tsy mila miandry ela loatra ianao.
Na dia ilaina aza ny miandry mandra-pahatongan'ny orinasa mihitsy manome fampahalalana bebe kokoa ho an'ireo mpampiasa manana OnePlus 6 voakasik'ity fisolahana ity eo amin'ny efijery. Ny ampahany tsara dia olana iray voavaha amin'ny fomba tsotra miaraka amin'ny fanavaozana OxygenOS vaovao.
Mandrak'izao dia iray tamin'ireo vitsy, raha tsy izy irery, ny olana fa ny mpampiasa sasany dia nanana ny OnePlus 6. Izay tsy ratsy mihintsy, ary izany dia manampy amin'ny fampisehoana fa ny orinasa dia maodely azo antoka ho an'ny mpanamboatra. Indrindra ny maodely izay mivarotra ary koa ity iray ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » Ny OnePlus 6 dia hanamboatra ny olan'ny efijery amin'ny fanavaozana manaraka
Rocio baamontes gijon dia hoy izy:
Mila finday aho, tsy manana finday aho
Mamaly an'i Rocio baamontes gijon
Google dia tokony nanambara ny daty fampisehoana ny Pixel 3
Qin AI, ilay Xiaomi vaovao misy Android manodidina ny 25 euro